Ciidanka Koonfur Galbeed oo gacanta ku dhigay hub Shabaab ay lahaayeen | Baydhabo Online
Ciidanka Koonfur Galbeed oo gacanta ku dhigay hub Shabaab ay lahaayeen
Ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed howlgal ay ka sameeyeen duleedka Degmada Diinsoor ee Gobolka Baay, ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen hub ay lahaayeen dagaalyahano ka tirsan Ururka Al Shabaab.
Guddoomiyaha Degmada Diinsoor ee Gobolka Baay Ibraahin Maxamed Aadan Shigshigow, ayaa Warbaahinta u sheegay xilli Ciidamo Shabaab ka tirsan ay dadka ka aruursanayeen Zakawaad inay ku baxen ciidanka Koonfur Galbeed.
Guddoomiyaha Degmada Diinsoor, waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in Maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidankooda ay ka go’an tahay sidii guluf Millateri oo ka dhan ah Ururka Al Shabaab loogu qaadi lahaa dhamaan deeganada ay ka joogaan Koonfur Galbeed.
Ciidamada Shabaabka ayaanan ka fogeyn Degmooyinka Gobolka Baay oo waxa ay ku sugan yihiin meelo aanan sidaasi uga fogeyn Magaalooyinka waaweyn ee ciidamada Huwanta ay gacanta ku hayaan.
Shabaab kama aysan hadlin hubkaan looga qabsaday Duleedka Degmada Diinsoor ee Gobolka Baay.